FAQs - Agalink
Audio & Vhidhiyo
DVI & VGA Tambo
MiniDP & DP Tambo
Panel Gomo Tambo
USB-C Cable & maAdapter
Nhare mbozha Zvishongedzo
Kuchaja Dhata Tambo
Us paDzimba kuratidzira
Nei Uchisarudza Agalink
Nhau & Blog
Ko netambo yenyu RoHS kana VAVARIRA Compliance?
Hongu, zvigadzirwa zvose kubva Umateck muri aiteerera pamwe RoHS (rutapudzo pamusoro Ngozi Zvinhu) uye kuzadzisa (Registration, Yekuongorora, mvumo, uye akavarambidza Chemical zvinhu) Tingagona kuti akapa bvunzo mishumo zvose zvinhu izvo zvigadzirwa kushandiswa. Tiri kukwanisa kupa pachena nechokwadi chigadzirwa yamakatenga kwatiri tiri RoHS kana VAVARIRA abvume. Zvino Contact isu kuti rondedzero kana bvunzo mishumo.
Sei nokukurumidza Ndinogona kuwana chipo kwauri?
Pakubvunza kwako kunogona akapindura mukati 2 maawa kubasa nguva, kana tiri dzoro kana uri pazororo, tinokwanisa kupindura iwe mumaawa 24. Kunyatsoshanda ndiye pakutanga yedu.
Ungamubatsira FREE ivhu kuongorora unhu?
Chokwadi, tinokwanisa kupa kukurumidza mharidzo kuti yeGmail.END_STRONG pakuongorora quality, ivhu iri zvachose vakasununguka, asi kutumirwa mutengo vanofanira woga, kuti kwaizova kukuru kana iwe unogona kupa kwenyu keriya nhoroondo.
Chii rako Odha uwandu?
Our wenguva MOQ iri hrs 1000 paminiti chinhu kana zvachose 3000 mita mbishi waya paminiti Specification zvakafanana ruvara. nokuti pamwe wokutanga, tiri kupfuura kufadzwa kugamuchira kwako muedzo kuti akafanana 1oo hrs kana 200 bv. uye kana tiine mumatanda, tiri kukwanisa kutengesa miduku kwamuri, pls nesu kutiudza mashoko ako chinodiwa.
Sei nokukurumidza kunogona iwe anotakura kuti netambo kana Ndinoti zvino?
It kunoenderana nokurondedzerwa dzenyu, uwandu uye package..etc, kutungamirira nguva yedu romuzvarirwo iri vhiki 3-4, kana zviri miduku kuti uye tine zvinhu pamusoro kudanda, tinokwanisa anotakura nayo yedu vhiki 1-2. Tinofara kuita kuchikosheswa kwokukurumidzira chinodiwa, ndapota chete ngatiregei kuziva kwenyu chipfuro.
Unogona kupa mutengo kunobudirira kutumirwa mhinduro kwatiri?
Hongu, tine inokosha vadyidzani musi Sea, mhepo uye aiva mumagwa, mutengo tinogona kupa zviri zvemakwikwi chaizvo.
Sei kubhadhara, chii mubayiro wako izwi?
muripo wedu rinowanzoshandurwa ndiyo 30% mubhangi, nokudzikama pamusoro B / L, isu rakavhurika chikwereti kupa mazuva akadai OA30 / 45/60 kuti zvakanaka pamwe vatengi uye zvachose kuti mari pamusoro 30.000 USD. T / T, L / C, Paypal, Western Union ... nezvimwewo zvinowanikwa zvose.
Unogona customized chigadzirwa kwatiri?
Chokwadi, isu pfungwa OEM shoma netambo nokuda muchiso zvakanaka, zvisinei wokuenzanisira, kurongedza kana customized urefu, ruvara, tiri kuita chaiwo chigadzirwa akaita pakushayiwa kwako chii, chete kutaura nesu kuti customized netambo pamwe branding wako.
Content Your Kunoitirwa Here
Kumbira A Quick Quote. Unogona kuwana inofambiswa mumaawa 24. Kuvimbisa!
Kumbira A Quick Quote
Kero: Kamuri 907, South Tower, 288 Xilu Road, Zhenhai, Ningbo, China. 315201
Phones: +86 574 8704 2335
Phones: +86 189 57871301
© Copyright 2012-2019 Agalink.com | Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa Inotungamirirwa naNinbo Farsince Electronic Co, Zvishoma